Gudoomiyaha degmada Bula-Burte oo ka hadlay Qarax miino oo lagu aasay Garoonka Diyaaradaha – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaGudoomiyaha degmada Bula-Burte oo ka hadlay Qarax miino oo lagu aasay Garoonka Diyaaradaha
Gudoomiyaha degmada Bula-Burte oo ka hadlay Qarax miino oo lagu aasay Garoonka Diyaaradaha
Hiiraan Xog, Jun 13, 2018:- Maamulka degmada Bula-Burte ee gobolka Hiiraan ciidamada Ammaanka dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay gacanta ku dhigeen Qarax miino oo la sheegay in lagu Aasay inta u dhaxeysa Garoonka Diyaaradaha ee Magaalada Bula-Burte.
Gudoomiyaha degmada Bula-burte , ayaa sheegay Al-Shabaab inay qaraxaan ku aaseen halkaasi si ay dadka shacabka ah ugu waxyeeleeyaan, balse ciidamada ay arrintaasi ka hortageen.
Waxaa uu sheegay howlgallo ay sameeyeen ciidamada Ammaanka in ay gacanta kusoo dhigeen saddex qof oo lagu tuhmaayo in ay ka dambeeyeen Falkaasi,islaamrkaana hadda ay ku socdaan baaritaano.
Gudoomiyaha ayaa sidoo kale xusay in dadka Shacabka iyo ciidamada oo wada shaqeyn ay dhexmartay in ay sahashay in Qaraxaasi gacanta lagu dhigo.
Wadada isku xirta Magaalada Bula burte iyo Garoonka Diyaaradaha Magaaladaasi, hadda ka hor waxaa ka dhacay qarax miino oo dad shacab ah iyo ciidan waxyeelo kala duwan ka soo gaartay.
AKHRISO:- Wasaarada Ganacsiga ee dowlada Soomaaliya oo manuucday waxyabaha caruurta ku Ciidan
Taliyaha ciidamada Xooga Soomaaliya oo gaaray magaalada Kismaayo